လိုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြော်ငြာ - ဗီဒီယိုချက်တင် - အသက်ချိန်းတွေ့ - အသက်ရှင်သောမြစ်ရေ!
ဗီဒီယိုချက်တင် - အသက်ချိန်းတွေ့ - အသက်ရှင်သောမြစ်ရေ!
ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူၡမ်ားယောက်ျားတွေ၏ယောက်ျား၌နေသောသွင်လိင်အတွက်ဆှဝွက္စြာဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အဆင္ေအွန်လိုင်း။ ဒီနေရာမှာသင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပြီအခမဲ့ဆှလိင်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူလှပသောအယောက်ျား၊အဖြစ်များစွာသောအခြားအခမဲ့ဆှလိင်ဗီဒီယိုချက်တင်။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အမှန်ပြတ် ၊၊လိင်နှင့်လိင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆှဗီဒီယိုများလိင်နှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်ဘဲ။ အကြိုက်ဆုံးဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတစ်ဦးကကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်ပျော်မွေ့မမေ့နိုင်သောသွင်အွန်လိုင်းလိင်၊နှင့်လုံးဝအခမဲ့။ အဆီ၊တက်ကြွနှင့်အရသာရှိပါတယ်၊မင်္ဂလာရှိနှစ်ပယ်ပြသရန်မိမိတို့အဝတ်အချည်းစည်းခန္ဓာကိုယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ဆှဗီဒီယိုစကားပြောသင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်ကြွက်သားအားကောင်းလိင်၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာယောက်ျားတွေကိုချစ်သောသူဆက်သွယ်ရေးနှင့် ။ အကောင်းဆုံး ယောက်ျားတွေချစ်သွားသင်ကမ္ဘာ၌အချစ်အလိုဆန္ဒနှင့်။ ထူးခြားတဲ့နှင့်မေတ္တာထီးယူနိုငျသင်တို့အပေါ်သူတို့၏စွန့်စား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ့်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊သငျသညျတှေ့နိုငျကိုယ်ကိုသန့်ယောက်ျား၏အိပ်မက်များ၏အသည်းအသန်ဖ်ာ္ေျဖေရးကိုသာနှင့်အတူ။ မှုနှင့်သင်လိုအပ်သမျှတစ်ဦးကမ်။ သာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်အေးဖြောင့်၊အချွန်၊အသား၊လိင်၊လှပတဲ့အမွေးသည်လူနှင့်အခြားသူများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ဆှဗီဒီယိုစကားပြော၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အားလုံးအတွက်ဒီကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး၏အထီးညမ်းဗီဒီယိုများ။ ၊သင်ကနောင်တမည်မဟုတ်။ သွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်အမျိုးအစားဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေ၊သငျသညျအကွောငျးသိသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်။ ပူကြော -ကြိုးစားတဲ့လူအတွက်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အလှည့်၊သင်သည်သင်၏အလိုရှိသောအကြံအစည်သို့အမှန်တကယ် ။ အခမဲ့နှင့်စျေးနှုန်းသက်သာသောဝန်ဆောင်မှု၏နှစ်လိုဖွယ်အမျိုးသားများ၏ဂြိုဟ်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသင်တိုင်းမိနစ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ကမ်မှန်ဘီလူး။ ခံစားဖို့တစ်သာယာသောကိုလေထု၏ဖော်ရွေလိင်သိပ္အေ။ ကြီးစွန့်စားသင်စောင့်ဆိုင်းနေကြ။ အပေါ်ကြီးမားအရင်းအမြစ်များနှင့်မုခ်ဦးများ၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်အလွယ်တကူကောင်းစွာဆက်သွယ်ပြောဆိုဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်၊အနားယူ၊သန့်နှင့်တော့။ အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးသာယာသောအကျွမ်းနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားစရာအချိုအဖော်မည်ဟု၏အရင်းအမြစ်တူကွဲပြားမှုများ၏ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်ဤအရင်းအမြစ်များကွဲပြားသော၊အလှဆင်ဖို့အဆင်သင့်တက်သင်၏အထီးကျန်နှင့်အပေါ်ထားရန်အမှန်တကယ်ပြသ။ ဒီမှာပါ၊အမျိုးအစားအတွက်ဆှဗီဒီယိုချက်တင်အမျိုးသားများနှင့်အတူအွန်လိုင်းရှိပါတယ်၊အထူးဆှလွှမ်းမိုးသောကိုးကွယ်နေကြတယ်အားဖြင့်လှဲပါဘူးခွင့်ပြုဖို့သူတို့ကိုသင်အွန်လိုင်း။ ပင်အများဆုံးအ နှင့်လူကြိုက်အရသာရှိသောအမည်မှာသေချာပါသည်မှအယူခံ။ တွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ကမ္ဘာ၏အဒိတ်၊နစ္သြားေနှင့် မွေ့လျော်မည်ကိုလုပ်ချင်ငုပ်သို့ပြန်၏ကမ္ဘာ့အအိပ်မက်များနှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်အသိအလိုရှိသောသင့်ရဲ့ဂျီနှင့်သင်၏အံ့သြဖွယ်စိတ်ကူးယဉ်။
ကျနော်တို့စတစ်ကာများအားလုံးအခါသမယ။ ဝမ်းမြောက်သောစိတ်၊အမျက်ဒေါသ၊စိတ်ချမ်းသာ၊အချစ်၊ကျွန်တော်တစ်မူထူးခြားသောကြောင်များအတွက်မြေတပြင်လုံးစၥည္းမ်ား၏ခံစားချက်။ စိတ်ခံစားမှုအသုံးအနှုဖြစ်ကြောင်းသတ္တိနှင့်မျက်စိ-ဖမ်း။ သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအကမ်အဖြစ်အကယ္၍စိမ်း၊ တွေ့ရှိထားတဲ့အတွက်ကျပန်းစနစ်၊နှင့်အတူအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်မိတ်ဆွေများက။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊သင်လျစ်လျူရှုမလိုချင်တဲ့ ၊ထိုသို့အားဖြင့်မှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်း။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ကိုအများကြီးအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ချစ်ကြည်။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များရွေးချယ်သောသူကလူအများစုကိုဖြုန်းသူတို့၏ဘဝများ။ ဆောင်တတ်အတူတူလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့နှင့်စဉ်းစားသည်အလွယ်ကူဆုံး၊အမြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးအဆင်ပြေသောနည်းလမ်းသိမှရရန်အသီးအသီးအခြား။ နေ့တိုင်း၊ထက်ပိုပြီး ၁၀၀ မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးလွှင့်တိုက်ရိုက်ကနေတဆင့် ။ သူတို့အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတစ်ဦးသာယာသောအသက်ရှင်သောစကားပြောဆို။ ချက်များနှင့်ပို့စ်သူတို့၏ဓာတ်ပုံများအတွက်အစာကျွေးဖို့အခွင့်အသံလွှင့်။ မဟုတ်ပါဘူးလျှင်စိတ်ဓါတ်များအတွက်များအတွက်၊သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်၊မိမိတို့အဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယို။ ထိုသူအချို့တို့သည်အလုံးဝအခမဲ့။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းကိုအဆက်မပြတ်ရေးသားတော့မပျင်းရ။
ထိပ် ၉ ကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်လောကရှိချိန်းတွေ့ဘို့-
ချစ်ဧည့်သည်များ၊ကျနော်တို့အပြင်သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်တွေအများကြီးဗီဒီယိုချက်တင်စကားပြောဆိုနိုင်သည့်အတွက်:စကားပြောနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသား။ ဒီဆိုက်တွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်အလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်ယူကရိန်း၊ရုရှား၊အမေရိကန်၊ဂျာမဏီ၊ပြင်သစ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ ရွေးသင်သည်သင်၏အလိုရှိသောဗီဒီယိုစကားပြောဒီအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ေစာရင်းအဆက်မပြတ်ရေးသားသစ်နှင့်အတူ။ ဒီနေရာမှာသင်အမြဲအတွေ့သဘောဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဘယျသို့ကဒီမှာတွေ့လိမ့်မည်အားလုံးသောဗီဒီယိုချက်တင်ကိုသင်အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်။ အားတွစ်တာအစာကျွေးအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အသစ်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏၊ဒီ၏ညာဘက်လမ်းကြောင်းအသစ်ဆက်ဆံရေးက၊ချိန်းတွေ့နှင့်ပင်ချစ်။ သင်ရှိပါကသင်လိုအပ်သမျှကိုအဘို့အလှန်ဆက်သွယ်ရေးအင်တာနက်ပေါ်မှာ၊သင်သိသိသာသာသင့်အသက်တာကိုပိုမိုကောင်းမွန်။ ရိုးရှင်းတဲ့စာသားချက်တင်ရှိသည်အချို့သောသိသာနည်းချက်များ။ အတွက်ဗီဒီယိုစကားပြော၊သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အသီးအသီးအခြားအစဉ်ရှိတဲ့အတွက်တကယ့်စကားလက်ဆုံ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အခြားဘက်ခြမ်းမှ။ ကျပန်းအွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်သင်ချိတ်ဆက်ဖို့တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောလူစိမ်းကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အရှိ။ သင်တို့ထံမှရှေးခယျြနိုငျအများအပြားဦးစားပေး၊ဒါပေမယ့်သင်ဆဲမမသိဘူးသောသူ၏နောက်စကားလက်ဆုံမိတ်ဖက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အများဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှပိုက်ဆံနှင့်ပတ်သက်။ စတင်အဖွင့်ကို၊ချက်တင်အဖြစ်အများကြီးငျလိုခငျြအဖြစ်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အမြဲအဘို့အဖွင့်လှစ်သင် ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ကျနော်တို့စုဆောင်းအားလုံးနီးပါးအဆိုပါအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အစာရှောင်ခြင်းဗီဒီယို။ ဒီ၏နာမတော်သည်တစ်အွန်လိုင်းချက်တင်အစည်းအဝေးသောကြောင့်၊သင်ချိန်းတွေ့စတင်အလွန်လျှင်မြန်စွာ။ အတွက်ဗီဒီယိုစကားပြော၊သင်တွေ့ဆုံရန်လူတစ်ဦးအတွက်အတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ ထိုကဲ့သို့သောအသိအကျွမ်းများသောအားဖြင့်အတူအဆုံးသတ်သည့်အဆက်အသွယ်၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဖုန္းနံပါတ္၊င့္ခ္မ်ားပရိုဖိုင်းအတွက်လူမှုရေးကွန်ရက်၊အရာပြီးနောက်စစ်မှန်သောအစည်းအဝေးများမှာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာမည်သို့ရဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ။ စိတ်ကိုထားပါဆက္သြယ္ေသာအခါသာဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊သင်လိုက်နာရမည်ချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှေ့တွင်။ သင်ကတည်းကမြင်နှင့်အကြား၊ကြိုးစားစောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းတစ်ခုအသွင်အပြင်။ ကြိုးစားမှအပြုံးနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေ၊ကူညီလိမ့်မယ်သင်ပိုမိုရှာဖွေလူကောင်းစကားပြောနှင့်လူတိုင်းထိ။ ဒါပေမယ့်အတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊သင်သည်လည်းတွေ့ဆုံရန်သောသူလူအရေတွက်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်၊အချို့သောဗီဒီယိုချက်တင်ရှိသည်၏အပေးပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ဤအသုံးပြုသူများ။ စိတ်ကိုထားပါအတွက်၊သင်ချက်ချင်းကြည့်ရှု၊သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကိုဆက်သွယ်ထားသောပြီးနောက်။ မ အလွဲသုံးစားဤအချက်ကိုမမြင်ချင်ထက်ပိုပြီးလူသင်နားလည်ကြှနျုပျတို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ဒါကြောင့်အကြံပြုသည်ပထမဦးဆုံးသတ်မှတ်သောရည်ရွယ်ချက်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်ရှာဖွေနေချိန်းတွေ့။
တစ်ဦးချင်းစီလေလံသောအမှတ်အဖြစ်ဝယ်ယူ၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့-ဝန်ထမ်းများအတွက်တိုးချဲ့လိမ့်မည်ရွေးချယ်ထားသောကာလမှနောက်ဆုံးလေလံဆွဲဝယ်ယူ။ ခံရ-တစ်ဦး-အသုံးပြုသူမြင်နိုင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်လူတိုင်းအိမ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်၊သင်ပင်လျှင်။ လူတိုင်းလာနိုငျအဘို့သင်တို့နှင့်အတူပုဂ္ဂလိကစကားလက်ဆုံ။ ရင်းနှီးသောသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောအကြောင်း ဖိတ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အခြားမန်ပဳႏိုင္မယ္၊၊စသည်တို့ကို။ တားမြစ်ထားအတွက်စက်ဝိုင်း၊ဝှက်၊နှင့်ပတ်သက်။၊မဟုတ်လျှင်သင်မှတ်သားသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအပေါ်ကနှင့်အတူပြောင်း။ လျှင်သင်ချိုးဖောက်ဤမူဝါဒ၊သင်ဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါသင့်ရဲ့အဘယ်သူမျှမ-အမ်းအဆင့်အတန်း၊သို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းပါဝင်သောကြော်ငြာများကို၊အကြံပေးချက်များအပေါ်ပေးဆောင်န်ဆောင်မှု၊နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဖုန်းနံပါတ်များ၊လိပ်စာများသည်အမြဲတမ်းပိတ်ပင်မှုတွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲအမှန်ကိုအမ်းငွေသို့မဟုတ်အရွင္းလင္းခ်က္။ တစ်ဦးချင်းစီလေလံသောအမှတ်အဖြစ်ဝယ်ယူ၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လောင်းကစားအတွက်တိုးချဲ့လိမ့်မည်ရွေးချယ်ထားသောကာလမှနောက်ဆုံးလေလံဆွဲဝယ်ယူ။
ပူးပေါင်းပါဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ အဇြန္လဲ့ေအုပ်စုနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်အကြောင်းကိုအားလုံးကိုအတင်းပြီးပြိုင်ပွဲ။ ဆက်သွယ်ရေးသည်အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်တန်ဖိုးအဘို့အခေတ်မီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုရှုပ်ထွေးပြီး၊တခါတလေ၊အပြင်ကနေသွင်ဆက်သွယ်ရေး၊အဘယ်သူမျှမကအခြားအခွင့်အခြားလူတို့အားပြောဆိုရန်၊အချို့သောပြဿနာများနှင့်သာမျှဝေပါ။ ၏အင်္ဂါရပ်များ ခွင့်ပြု၊သင်ရှာတွေ့ဖို့အ ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အရှိနဲ့အလွယ်တကူနှင့်ရိုးရိုးအတွက်ဖြည့်စွက်အတွက်ကွာဟချက်။ ပာကနေတဆင့်ဗီဒီယိုစကားပြောသည့်အခါသင်တို့အဘို့အဆင်ပြေပြေနဲ့လိုအပ်သော။ ငါလိုချင်တဲ့အရာကိုသိရန်ဆွဲဆောင်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့ဤစကားလုံး။ တကယ်တော့၊အရာအားလုံးကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း:ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ဝဲအသုံးပြုသူများအထောင်ပေါင်းများစွာ၏၊နှင့်ဤသည်၎င်း၏ပင်မတန်ဖိုး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ဒီချက်တင်မှာသည့်နေရာတွင်အဆင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်နေ့တိုင်း၊နှင့်အတူတကွဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစေသည်ဆက်သွယ်ရေးမခြောက်သွေ့မဲ့၊ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်၊သွက်နှင့်။ အကူအညီဖြင့်အခမဲ့ဝဘ်စကားပြောခန်း၊သငျသညျအရာတစ်ခုခုရှိသည်ကိုတက်အလှဆင်ရန်ညှိုးဆောင်းဦးရာသီညနေခင်းသည့်အခါ၊အမိုးအသံအပေါ်ကတ္တရာစေးပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်၊နှင့်သင်အစိတ်အလျင်အမြန်ပြန်သွားရန်သုည အဆိုပါတယ္။ အကစားတဲ့-ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူဤအမည်သည်ပြီးသားလူသိများ-အဖြစ်လာ၏ဒီနည်းလမ်းကိုအများ၏ဆက်သွယ်ရေး။ နည်းလမ်းများစွာအတွက်၊အသံုးခ်ႏိုင္မႈ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊အလွယ်တကူအင်တာနက်၊နှင့်အပြောင်းအလေးပေးအတွက်ကစားအခန်းကဏ္ဍ။ အခမဲ့ကစားတဲ့သည်ဝမ်းမြောက်ေနခ်င္တယ္ဆိုလူ၊ဒါပေမယ့်သူများပြောရုဏ်သည်အထိလည်းဆက်သွယ်ပြောဆို။ အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း၏စကားပြောတဲ့သီးခြားပေါင်းပါ။ ဒါကြောင့်စကားပြောကိုစတင်၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးရှည်နေတဆင့်သွားမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်၊အရာရုံကြီး။ ချက်တင်ကစားတဲ့အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့အခမဲ့ချက်ချင်း၊သင်ချိတ်ဆက်နိုင်နှင့်အတူအခြားလူတစ်ဦးနီးပါးချက်ချင်း။ သုံးစွဲသူအရေအတွက်ကြီးထွားလာသည်နေ့တိုင်းတိုးပွါးသောအခွင့်အလမ်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ကိုယ်အသွင်တူစကားပြောဆိုချက်တွေကိုများအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာ။ လူတိုင်းသိသောခရီးသွားလာအားဖြင့်ရထားအတတ်သည်အရေးပါပြီး၊ဒါဟာအဘယ်သူမျှမမတော်တဆ:မောင်မျိုးစြပ္က်ယ္နားထောင်မလိုမုန်းထားခြင်းမရှိဘဲ၊သသမ္မာကြံဥာဏ်နှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအနာဂတ်မှာ။ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တဲတော်အဖော်ကသင့်ကားအပေါ်တစ်ဦးရှည်လျားသော-အကွာအဝေးအမြန်ရထား၊နှင့်သင်၏ အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝအသစ်စံချိန်စံညွှန်းများ၏ဆက်သွယ်ရေးမှလာမယ့်ရုရှား၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ်စကားပြောသည်တောက်ပ။ ၏ဂုဏ်အခမဲ့ ကြောင်းလုံးဝမည်သူမဆိုအသုံးပွုနိုငျအားလုံး၎င်း၏အင်္ဂါရပ်။ သင်တစ်ဦးဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတစ်ခုအဆင့်မြင့်အင်တာနက်သုံးစွဲသူအနည်းဥပဒေများ၏။ ရုန်တစားဖို့အခြားအမြန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ။ မရှိအတားအဆီး၊ဆိုလိုတာကလူအတော်များများပါဝင်၏ဤပုံစံအတွက်ဆက်သွယ်ရေး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းသောရှယ်ယာများ၏နိယာမမှပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်အခြား၎င်း၏ြတခါတရံအစုံအလွန်တင်းကျပ်သောနိမိတ်။ ဗီဒီယိုစကားပြောတတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုချိုးလုံးသားလူမႈတရားဖြစ်လာသူဖြစ်ချင်တယ်။ ရှက်နှင့်ဆုံးဖြတ်တောက်တောက်နှင့်အရေ၊နှင့်-ဒါ-မစမတ်ပါ၊ကျွန်မတို့အားလုံးလူသူတပ်မက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စပါး။ အများကြီးရှိပါတယ်လူတွေအတွက်ရုရှားကရန်အသင့်ဖြစ်ကြမယ့်ဒီလုပ် ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်နှင့်တွေ့ရှအများအပြားအားသာချက်များ။ အခွင့်သင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲနှင့်စတင်နေ့စဉ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူ၊ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူများ။ ဗီဒီယိုစကားပြောချိန်းတွေ့လိမ့်မည်အမှန်တကယ်တွေ့ရှိ၊ဒါပေမယ့်လည်းအပြီးမပြီးစီးနိုင်သည်ကိုလက်ဆောင်အသစ်ကမ္ဘာနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းအားဖြင့်ဗီဒီယိုချတ်သည်အကျိုးအတွက်ရဲစွမ်းသတ္တိ။ သူနေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာအတွက်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ရေး။ ဒါပေမယ့်မကြာခဏဘယ်လိုရှိမလုံလောက်သောအချိန်၊သို့မဟုတ်မရှိလျှင်သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြောပြရန်အလွန်အစက်အပြောက်ယခုကဲ့သို့သောပြဿနာများအားချက်ချင်းဖြေရှင်းကြသည်။ ရန်လုံလောက်သောဖြစ်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်ရုရှားကစားတဲ့ချက်တင်ကနေတဆင့်အင်တာနက်ရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောစကားလက်ဆုံသွား။ အသစ်လက်တွေ့ဘဝ၏တတိယအထောင်-အအွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်။ စကားပြောဆိုချက်တွေကိုအချိန်မရွေးထိုနေ့၏ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်၊ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖို့ရှိပါတယ်မည်သူမဆိုမတှေ့င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရေး။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်နှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းအသစ်အဆန်းအပေါ်သည္။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်အသုံးဝင်သောဝန်ဆောင်မှုသင်ရခွင့်ပြုထားသောအကျွမ်းနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားစရာ ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲသင့်အိမ်၊ ဖြုန်း၊သင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန်။ ကစားတဲ့စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန်စတင်ဆက်သွယ်နီးပါးချက်ချင်း။ သင်ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်မျှမတာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်အသွင်။ အဆိုပါအခြေခံပညာ၏နိယာကစားတဲ့အလိုအလျောက်ရှာဘို့အညာဘက်ကိုလူတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်။ အသီးအသီးဗီဒီယိုအစည်းအဝေးထူးခြားကွဲပြား။ မည်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားရုံအပြင်ဘက်သွားရ၊အချင်းချင်းသိရန်။ အချို့လူဖြစ်ကြ၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်ပင်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထား။ စာသားကေတာ့။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးအပြောင်းအလဲအခါသြားပါမယ္။ အဲဒီအပေါ်အသွင်လမ္း၊ကျနော်တို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်သူတစ်ဦးသည်အဘယ်သူ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ငါတို့ဥစ်စာ။ နှင့်သောသူတို့အဘို့အလိုစကားပြောရှိပါတယ်၊ဆိုင်ချက်တင်။ ဒါဟာမသနားဘူးအစဉ်အမြဲအဘယ်အရာကိုမြင်အခြားလူတစ်ဦးကယ့်ကိုနဲ့တူလှပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှ၊အင်တာနက်ပေါ်မှာလူတိုင်းကြိုးပမ်းဖန်တီးရန်ပြီးပြည့်စုံသောပုံရိပ်ကိုမိမိတို့အဘို့။ သို့သော်မကြံ။ ဗီဒီယိုစကားပြောသင်ကူညီလိမ့်မည်နဲ့အွန်လိုင်းဆက်သွယ်တဲ့တကယ့်လူတစ်ယောက်အကြောင်း၊မတူပုံရိပ်တစ်ခုနှင့်အတူတစ်ပြောင်ပြောင်နှင့်လေကြောင်းရန်။ ဆက်သွယ်ရေးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများအထူးသဖြင့်အတွက်အမကြာခဏအထောက်အကူ ခက်ခဲလူထုတ်ဖေါ်ရန်မိမိတို့ဖျောက်ဆက်သွယ်ရေး၏ပြဿနာများနှင့်တွေ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အမျိုးမျိုးအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ချစ်။ ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ပျက်နိုင်မှသွားအဆိပ်အတောက် ၊ပြီးနောက်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်အတူအဘယ်သူ၏တူကမကြည့်ပါဘူးဗီဒီယိုချက်တင်-သင်ချင်ကြပါဘူးအထိုင်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဘယ်လိုခွဲခြားရန်မြင်းမှလျောက်ပတ်ပေ ။ ဘယ်အရည်အသွေးသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရှိသည်သင့်အတွက်ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းသက်သေပြခဲ့သည်ကိုယ်တော်တိုင်အတွက်ဆက်သွယ်အင်တာနက်ကနေတဆင့်၊ဤဆောင်းပါးသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဟာဗီဒီယိုစကားပြော. ကြသည်မဟုတ်သူများအကျွမ်းတဝင်နှင့်အတူဤအအက္ပ္ကိုထံမှရှေးခယျြနိုငျအများအပြားအဖြေကိုဤမေးခွန်း။ လူအများစုကအဲဒီမွာပဲအလမ်းမဖြုန်းဖို့သူတို့ရဲ့အခမဲ့အချိန်အ၊ဒါကြောင့်၊ဘာမှထပ်မ။ သို့သော်၊စရှိတယ်သောသူတို့တွေ့မြင်နိုင်ပြီးတန်ဖိုးရှိအောင်မြင်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ရှာဖွေသင့်ရဲ့အခြားတစ်ဝက်၊ခ်ဲကုပ်၊ရုတ်တရက်သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော။။ အဲဒီအားလုံးမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်၊ဘယ်လိုသင်ယူဖို့ဘယ်လောက်တိုးမြှင့်ဖို့ဗီဒီယိုသာ။ သငျသညျဆိုပါက ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်လုပ်ချိန်ဖြုန်းဖို့ချင်ပါဘူးအပေါ်တစ်ဦးရှည်လျားသောစာပေးစာယူ၊ပြီးတော့ဝဘ် ကြီးစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အတူဤဝန်ဆောင်မှု၊တစ်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးဖွင့်လှစ်တက်သင်တို့အဘို့အ၊သငျသညျအဘယ်သူမျှမရှိသည်အချိန်ကန့်သတ်၊သင်ကပြောပြနိုင်ပြီသင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အဖြစ်၊သင်လုပ်နိုင်သည်အမြဲဆက်သွယ်စိတ်ဝင်စားစရာနှင့်အခြားလူများနှင့်အတူ။ မလိုအပ်စဉ်းစားဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းရေးသားဖို့တစ်ခုခုသို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦးအတွက်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်၊ကိုယ့်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ကမ်နှင့်ပျော်မွေ့။ ဘယ်အရာကိုအမည်မသိချိန်းတွေ့ချက်တင်ဆွဲဆောင်မှုအသုံးပြုသူများအတွက်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်ကိုလူတိုင်းမည်သူဖြစ်ပါဝင်ဖို့တတ်နိုင်လုံးဝအခမဲ့မိမိကိုယ်ကိုနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကို။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့သူတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းသည်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌ဖြစ်စေ၊သူတို့မိသားစုဝင်သိုမဟုတ်အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်၊လူတိုင်းအညီအလွန်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်မည်သူမဆို၏။.
ချိန်းတွေ့အမျိုးသားနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်အနောက်ဘက် အင်တာနက်ကနေတဆင့်အတူ၊များစွာသောအခြားအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု၊ရှည်လျားပြီးအစိတ်အပိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သင်တို့ကြားအများအပြားပုံပြင်များအကြောင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကူညီပေးခဲ့သည်သင်ရှာတွေ့တစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်တည်ဆောက်တစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုအနာဂတ်အတွက်၊ဒါပေမယ့်အခြားပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းမြှောက် ၅၈၊အထောင်မြို့ထက်မပိုတဲ့အနှစ်။ ပြဿနာကဘာလဲ။ အဖော်လိုက်ဖက်ပြဇာတ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အနောက်ဘက်တွင် ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့အဘော်စိတ်ဝိညာဉ်အမှန်တကယ်သင်တို့အဘို့အ၊ထိုအတူဆက်ဆံရေးသောဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးထိုးထိုး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြသလိုက်ဖက်ရမှတ်အသီးအသီးအဘို့အဘယ်သူသည်လူတစ်ဦးနှင့်အတူသင်နှင့်ခွင့်ပြုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်အနောက်ဘက် ဒါဟာရောက်ရှိနေပြီအသစ်တစ်ခုအဆင့်၊နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ ။၅၀ အသက်အနှစ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့သောရဟန်းသည်မကောင်း ရွှင်လန်းလူဟာသက ။ ရှာတွေ့ခြင်းငှါအလိုအကောင်းတစ်ဦးအမျိုးသမီးအသက်အဘို့အချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အပြန်အလှန်။။။။။သားသမီးမဟုတ်အတားအဆီးတစ်ခု။ ရှိလုံလောက်သည်မုန့်အတွက်လူတိုင်းအတွက်။ ဖြစ်ရမည်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ယောက်ျားအသက္ ၄၀ နှင့် ၅၂။ ဦးစားပေး:ယုံကြည်မှု၊မြင့်မားတဲ့အဆင့်၊ထောက်လှမ်းရေးရှေ့ကကြိုဆိုပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ။ အကြှနျုပျတို့သညျအကောင်းတစ်ဦးစုံတွဲနှစ်ဦးမိန်းကလေးများ၊၃၅ နှင့် ၃၇ အသက်အနှစ်။ ကျနော်တို့အတူတကွနေထိုင်အတွက် ၅ နှစ်ပေါင်း။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်စီစဉ်ပေးခြင်း။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ကျနော်တို့အဘို့ရှာကြသည်:က်န္းမာေရး၊အားကစား၊ဘဲမကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ပညာရေး၏။ အားလုံးအခြားအသေးစိတ်အချက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်စာပေးစာယူနှင့်လူတစ်ဦးအတွက်။ ငါအလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်လျောက်ပတ်သောလူတစ်ဦးခြင်းမရှိဘဲ၊မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်၊ဖြစ်နိုင်ရင်နှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးစစ်ရေးယောက်ျား၊မိသားစုစတင်။ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မဟာသာမန်လူတစ်ဦးနှင့်အတူသာမန်အလိုဆန္ဒ။ မချိန်အများကြီးဖြုန်းအပေါ်။ ငါ့ထံသို့ရေးပါဦးမည်၊ကျိန်းသေတုံ့ပြန်ဖို့လူတွေကိုဘယ်သူကိုနှင့်အတူရှိနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စာနာနှင့်ဘုံအကျိုးစီးပွား စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရကုန်ကျွမ်း၊ချက်တင်၊အကောင့်သို့ယူလိုက်ဖက်တဲ့၊အမှစွမ်းရည်ကိုရှာဖွေစာန်အင်တာနက်ကနေတဆင့်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များထောက်ပံ့လုံးဝအခမဲ့။ သာရက်စွဲများများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးလိုလန်၌အသက်ရှင်ရန်လူမႈဖူလံုေဒါမှမဟုတ်ရှိလူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသမီး သူခံစားရရန်ကိုချစ်အနွေးထွေးတဲ့လူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ငါ့နာမကို ။ ငါသည်လူများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးများ၊ငါချစ်ပြီးချစ်ရသူဖြစ်။ ငါအရမ်းချိုမြိန်၊နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ချစ်ခင်သောမိန်းကလေးတစ်ဦးသည်အ၊ကျနော်လက်မခံကြဘူးသော်နှင့်ဒေါက်တာ။ အနက်လူအဖို့အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုအကြှနျုပျကိုအီးမေးလ်ပို့။ ဒါဟာအားလုံးအတူစတင်သည်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးလျှင်၊ဆက်သွယ်ရေးသည်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာချစ်ကြည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့အစိတ်ဝိညာဉ်၊ချစ်ကြည်ပြသတဲ့သဘောရင်းနှီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာအဘို့အ၊ရင်နှီးတတ်၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု-အပလူတစ်ဦးအသက်အဘို့။ ပွင့်လင်းတဲ့၊လူမှုမိန်းကလေးဘဲ၊သရဖူသို့မဟုတ်ဟပ်။ ငါတက်တိတ်တဆိတ်၊ရင်ခုန်စရာဖြစ်၊လျှင်ငါတော့တစ်ခုခုအသစ်။ ငါခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ကခုန်။ ရမ်သည်။ အစဉ်အမြဲဖြောင့်။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူသည်အသတ်ထက်ဖွင့်ဖို့ခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်တွန်းနှင့်အတူသူ့ကိုချက်ချင်းကြောင့်သာငြင်းခုံတစ်ခုနှင့်အတူမောင်းရင်သူအနား-စကား၊ နှင့် ။ ဒါပေမယ့်မဿိသည်ရိုးသားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကဒါအရိုးသားစေသည်သင့်ရဲ့အံသွားကိုထိခိုက်:သူတို့တုံ့ပြန်လိမ့်မည်အလွန်အပှငျ့ပှလျှင်သင့်ရဲ့ဆံပင်ညှပ်ကိုက်ညီမသင် သို့မဟုတ်အဝတ်အစားကိုသင်ကြည့်သောအဆီ။ ငါအဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်အရာတစ်ခုခုအခြားသူများများအတွက်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဘို့၊ဒါပေမယ့်လည်းအလုပ်ဖို့အရာတစ်ခုခု။ တစ်ခုခုလုပ်ပျော်မွေ့ရန်အအောင်မြင်ခြင်း၏ခံစားချက်။ အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုငါကြိုက်။ ငါလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်။ ငါကဲ့သို့နားထောင်ဖို့ပိုထက်စကားပြောခြင်း၊ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်အလက်များ၊အထင်နှင့်အတူတက်လာစိတ်ကူး၊ဖော်ပြအကြံအစည်၊နှင့်အခြားသူများအားနားထောင်သော။ ငါလိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တဦးတည်းငါအများဆုံးအဖိုးတန်ပုဂ္ဂိုလ်၌ငါ့အသက်ကို။ ခံစားကြည့်ပါနဲ့အတူတူရယ်မောလုပ်ပြီးအနားယူ၊အကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့အသီးအသီးအခြားနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်နေသာသောနေ့နှင့်အပေါ်တစ်ဦးအမိုး။ ငါငါ့အသက်ကို။ ငါ၏ဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီးပြည့်စုံသော၊ငါပြုချင်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူသည်ငါဖြစ်၏။ နှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ။ ငါချစ်စာဖတ်ခြင်းနှင့်ခရီးသွားလာ။ ငါချစ်သဘာဝနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ။ ငါ။။။။။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးပန်းပွင့်နှင်းဆီနှင့်အဖြူရောင်နှင်း။ ငါချစ်ရယ်နှင့်ဘဝခံစား။ ငါရှိသည်ဖို့ကြိုက်နှလုံးပါသစကားပြောဆိုချက်တွေကိုကျော်ညစာစားပွဲ။ ငါ ဖန်တီးသက္ေသင့်အိမ်ရှိ။ မယုံကြည်တဲ့အိမ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်လူအစဉ်အမြဲပူနွေးနှင့်သက်သာ၊လူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုသိသောသူတို့သည်လည်းချစ်ခြင်းနှင့်လက်ခံဒီမှာပါ။ ငါရိုသေလေးစားမှုနှင့်အကျိုးရှိ၊ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထိရောက်သော။ ငါဆွဲကောက်ချက်ကလူတစ်ဦးအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊လုပ်ရပ်တွေကို၊ရည်မှန်းချက်၊နှင့်အောင်မြင်မှုများ။ ငါနှင့်အတူစုံတွဲတစ်တွဲအတွက်၊ငါမြင်တစ်ဦးအားကြီးသော၊အအောင်မြင်သော၊ဆိတ်ငြိမ်တယ်၊၊မေတ္တာနှင့်ချစ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူတန်ဖိုးများနှင့်အမြင်ချင်းဘဝအပေါ်အတူတကွဖြစ်နှင့်ပေါ်တူညီသောလှိုင်းအလျား။ ခိုင်သည်ငါ့ကိုမည်သူတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်မချိုးဖျက်ဖို့ကြိုးစား၊ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးသည်လျော်ခြင်းနှင့်မေတ္တာလောက်တိုးမြှင့်ဖို့ရှိသမျှကိုကောင်းကြောင်းအတွက်ပါ။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ပိုလန်။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏ပရိုဖိုင်းအားလုံးမှနိုင်ငံအနှံ့အခမဲ့ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်၊သင်သုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူလူအတွက်သာပိုလန်၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားနိုင်ငံများအတွက်ကမ္ဘာ၏။ ရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်းရှာတွေ့၊သင်၏မေတ္တာ၊အသစ်သောအသိအကျွမ်း၊သူငယ်ချင်းများ၊အချိန်ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက် ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။
မည်မျှကကုန်ကျပါဘူးမိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှသွားစာမျက်နှာနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတွင်လိင်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊နှင့်လည်းဒီနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်စကားပြောမှတ်တမ်း ၁၈ အနီးကပ်။ ဒီေနရာခ်ိတ္ဆက္ပါမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ဖြင့်အကောင့်တစ်ခုအတွက်လူကြိုက်များတဲ့လူမှုကွန်ယက်။ သင်ချက်ချင်းခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊နေရာလည်းအရမ်းပြတ်သား။ ထိုဗီဒီယိုများသောထုတ်လွှင်အားဖြင့်လိင်အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်အဆက်မပြတ်ရေးသား၊ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုသောအဖြေအဖြစ်အတော်လေးပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်အဖြစ်လက်ခံနေသောမွီနှင့်ရှက်တတ်။.
မှတ်ပုံတင်ခြင်းသင့်ရဲ့စာမျက်နှာ၏ဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်သောချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အတူအမျိုးသမီးအတွက် ဂါနှင့်ချက်တင်အတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းနှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအရေးတွေကိုကန့်သတ်။ တွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများအတွက် ကလုံးဝအခမဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊မရှိကန့်သတ်အပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာယူ၊အတုအကောင့်များနှင့်ကန့်သတ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်၊လူမျိုးအချင်းချင်းတွေ့ဆုံနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ထောင်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသင့်ရဲ့စာမျက်နှာ၏ဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အပေါ်သွားရှာအသစ်အသိအကျွမ်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးအတွက် ဂါနှင့်ချက်တင်မှာစကားပြောနှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအရေးတွေကိုကန့်သတ်။
ချိန်းတွေ့နှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းကလေးများအတွက် အင်တာနက်ကနေတဆင့်အတူ၊များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၊ရှည်လျားဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သင်တို့ကြားအများအပြားပုံပြင်များအကြောင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကူညီပေးခဲ့သည်သင်ရှာတွေ့တစ်ဦးဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်တည်ဆောက်တစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုအနာဂတ်အတွက်၊ဒါပေမယ့်အခြားပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းမြှောက် ၅၈၊အထောင်မြို့ထက်မပိုတဲ့အနှစ်။ ပြဿနာကဘာလဲ။ အဖော်လိုက်ဖက်ပြဇာတ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက် ကူညီလိမ့်မည်သင်သည်အတွေ့အမှန်တကယ်စာန်သင်တို့အဘို့အ၊နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးသော အများဆုံးအဆင်သင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုဖော်ပြပါပုံများအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဘို့အသီးအသီးလူတစ်ဦးသည်အဘယ်သူသည်သင်တို့နှင့်အတူဆောင်တတ်၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက် အသစ်တစ်ခုအဆင့်၊နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ ကခက်ခဲရှာတွေ့မှတစ်ဦးတည်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်ပြောသမျှကိုသင်ချင်အထူးသဖြင့်အခါ၊လူအသင်မေးသောမေးခွန်းများအကြောင်းပြု၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနှင့်အတူဒုက္ခမှန်ခြင်း။ သင်မူကားရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိ။။။။ မဟုတ်ပါဘူးလျှင်ရဟန်းသည်သို့မဟုတ်တစ်ရသေ့ဖြစ်ခြင်းတည်းဖြစ်ရမည်။ ကျနော်တို့တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေအနေ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သည်။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး၏အထီးကျန်အတွက်ခေတ်မီလူနေမှုအခြေအနေဖြစ်ပါသည်ထက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူမီ၊သို့သော်၊အခြားတစ်ဖက်တွင်ဆန့်ကျင်ပေါ်၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘွား၊မိဘ၊မထိုင်ဘဲတနေ့လုံး၏ရှေ့တွင်ပါတီသို့မဟုတ်မော်နီတာ။ သူတို့ပါတီအစည်းအဝေး၊ခရီးမှထိုအရပ်မှ။ ရှိနိုင်သောနည်းလမ်းသိမှရရန်အခြားတစ်ဝက်များ၏အသိသာအခြား။ လက်ရှိမျိုးဆက်အတွက်ဤသဘောမျိုးမဟုတ်တော့ ရိုးရိုး။ အများစုကနေထိုင်သူများ၏အမြင့်နှင့်၎င်းတို့၏အိမ်နီးချင်းခါမှမမြင်ဖူးဘူးသူတို့၏မျက်နှာများ။ ရှိပါတယ်ဘယ်နေရာမှာသွားကြဖို့၊နှင့်မျှမသင့်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ သင်ဖွင့်ပြောစေချင်သွားဖို့အတွက်ကလပ်။ လူတစ်ယောက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်၊အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်မတည်ရှိ။ အခါအဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးတွေနဲ့ဆူညံ၊ဒါကြောင့်လည်းအရမ်းမခက်ခဲရှာတွေ့ဖို့အတွက်တိရစာန်။ ဒါပေမယ့်ရှိအင်တာနက်ကွန်ယက်ကို။ သူမကောင်းတဲ့အရာနှင့်ကြီးစွာသော၊နှင့်အသိအများကြီး၊အားလုံးကလျှင်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်၊သင်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အတွက် ။ အနည်းငယ်ပြီးနောက်မိနစ်၊သင်ပြီးသားမှတ်ပုံတင်တစ်ခုအဖြစ်အသစ်အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ပြတင်းပေါက်နှင့်အတူတစ်အများအပြားစံမ်ားပေါ်သည်ထင်ရှား။ အချို့သောအကြောင်းပြောချင်တာလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အခြားသူများ-အိမ်ထောင်နှင့်သားသမီးများ၊အခြားသူများလိုချင်ရှာတွေ့မှလူနှင့်အတူအလားတူအကျိုးစီးပွား၊နှင့်အချို့သောအသုံးပြုမှုဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အဖျြောဖွရေး။ ပြားပံုစံမ်ားကိုညွှန်ပြနေသောအသုံးပြုသူမှအတွေ့အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ရှိနေသောလူများအဘို့အသင့်လျော်သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်၊ပုံသဏ္ဌာန်၊မျက်နှာအသွင်သဏ္ဌာန်၊ဆံပင်အရောင်၊ပုံ၊နှင့်အခြားပါရာမီတာ။ သင်ဖတ်ပြီးပါပြီအများအပြားစံမ်ားႏွင့္အမည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အဘို့အရှာနေဖြစ်ကြောင်း။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊သင်စတင်နိုင်ပါသည်၊တစ်ဦးစကားလက်ဆုံ။ အချို့လူများကဲ့သို့ရေရှည်စာပေးစာ။ ဒီဘက်ပါ၊လူတစ်ဦးအသိပိုကောင်းမီလာမည့်အစည်းအဝေး။ သူမ်ားေနေ့စွဲအပေါ်သွားသည်နက်ဖြန်နေ့၌။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရမယ်အလွန်အလယ်အလတ်အဆင့်အချက်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုအပေါ်အမှန်တကယ်ရက်စွဲဖုန်းဖြင့်။ ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ၏အိပ်မက်ကိုအောင်မြင်စွာတွေ့ရှိတဲ့ဒုတိယတစ်ဝက်နှင့်အတူချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှု။ နေရာတိုင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်သာ အပါအဝင်အများအပြားလိမ်လည်။ ဒါဟာပိုပြီးတိကျဖို့ရှိကြောင်းပြောသူတို့ကိုပိုပြီးဒီနေရာမှာထက်အခြားဆိုက်များပေါ်တွင်။ သို့သော်၊ဤအကြောင်းကြောင့်ကြည့်ရှုရန်ဒီကုမ္ပဏီ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊သင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်သွယ်တဲ့လူ။ သင်ကံကောင်းနေလျှင်၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်စုံတစ်ဦးမှအနီးကပ်သင်။ သူ၏အထောက်အပံ့နှင့်အကူအညီအတွက်အရာအားလုံး၊ဒါပေမယ့်သူကောင်းတစ်ဦးအဆွေခင်ပွန်း။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမကြာခဏဖြစ်ပျက်။ ဟုတ်ကဲ့။ ကြီးမားသောအရေအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတွေ့ကြပြီဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ သူတို့နေထိုင်နေကြပြီအတူတကွနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ပြုစုပျိုးထောင်။။။။။ ဘာမှမမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာမကြာခဏဖြစ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရှာ။ ဒါကြောင့်မပါဘဲမပြည့်စုံအတွေ့အကြုံနှင့်ကျရှုံး။ ဒါပေမယ့်အလျှင်အ၊သင်ချက်ချင်းနားလည်အရာအားလုံးအချည်းနှီးမဟုတ်ခဲ့။ ဖြည့်စွက်ကာ၊ဒီအအတော်လေးသက်ဆိုင်ရာအချိန်တွင်၊လူအပေါင်းတို့သည်ချိန်းတွေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။
သာမန်အမျိုးသမီးနှင့်အတူသန်၏၂ စုမရှိဘဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်က၊ငါသွားနှင့်အတူလျှို့ဝှက်စွာ၊အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။ ငါမွှေးနှင့်ရိုးသားသော၊ဒါပေမယ့်ငါ့ဇာတ်ကောင်ဂျင်မဖန်ဆင်းသည်ဆိုပါသကြား။ လူအသက် ၄၅ ရန် ၆၀ နှစ်နှင့်အတူမသန်စွမ်းသူမဟုတ်ကြတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူ။ ဖော်ရွေမှု၊စောင့်ရှောက်ခြင်း၊နားလည်မှု။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊သစ္စာ၊ညား၊ငါနဲ့တူကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ ငါနဲ့တူအိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်။ ငါဥယျာဉ်ကိုဂရုစိုက်ရန်ပင်။ ငါအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအသက်ရှင်၊မိသားစုနှင့်ပို။ ငါ့အမျိုး၊လေပိုကောင်းလေသက်သတ်လွတ်သို့မဟုတ်လာမည့်ဖို့တစ်ဦးကျန်းမာတဲ့အစားအသောက်နှင့်အတူ၊အမဲသားကိုစား၊ကျွန်မရယ်မဟုတ်လမ်းအပေါ်။ ငါသည်အ ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး နှင့် ။ ကျွန်မလေးမြတ်တန်ဖိုးထားသိမ်မွေ့ဟာသကနှင့်ပညာရေး၊ဒါပေမယ့်မအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိခြင်း၏တစ်ဒီဂရီ၊ဒါပေမယ့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌စစ်မှန်သောအသိပညာနှင့်စွမ်းရည်ကိုအထင်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုချစ်တတ်သောသူ၏အသက်တာရှိပြီးထိုသို့သောအရည်အသွေးဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးဟာသ၊ရိုးသားမှု၊သစ္စာရှိမှုနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိရှိခြင်း၊ကြင်နာပြီးစာနာ။ နှင့်အခြားအလွန်အရေးကြီးသောအရည်အသွေးကောင်း၊လူ့သဘောထားမှပြည်တွင်းတိရိစ္ဆာန်များ-ကြောင်နှင့်ခွေး။ ကျွန်တော့်အတွက်။ မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးဟာဖန်တီးခြင်း၊မိသားစုအိမ်သာနှင့်အတူချိန်းတွေ့၏အလားအစည်းအဝေးအတွက်စိတ်ဝင်စားနေသောအစိုင်အခဲနှင့်ကောင်းစွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မိန်းကလေးဘဲမကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်။ ငါဘဝလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေအတွက် ၊ငါအသက်ရှင်သောအတွက် အလျောက်၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြပါဘူးအတွက်ရေရှည်စာပေးစာ။ ကြၽန္ေ ၄၈ အသက်အနှစ်၊အလေးအနက်၊အဘယ်သူမျှမမကောင်းတဲ့အကျင့်။ ဆေးတည်ငြိမ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ရှုပ်ထွေးသော။ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးသစ္စာဖောက်နှင့်ဖောက်။ လက်ထပ်ပြီးလူမဟုတ်စားစရာ၊ငါဘာမှမရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလိုလုပ်ဖို့ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်။ အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်။ သို့ရမနေပါနဲ့ပဋိပက္ခနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေး၊ဘဲမကောင်းတဲ့အကျင့်ကအမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိသည်လိမ့်မယ်အနာဂတ်မှာ။ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးမဟုတ်၊စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊နှင့်ကျွန်တော်မအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုရှာဖွေ။ အ ဒေသ။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အသံုးျပဳသူမ်ားပရိုဖိုင်းရှိသမျှကျော်ကနေအခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်အပေါ်ဆိုက်၊သငျသညျနိုင်လိမ့်မည်လူများနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်အဘယ်သူ၏နေအိမ်သို့အသာအ ဒေသ၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားတိုင်းဒေသကြီးနှင့်တိုင်းဒေသကြီး။ ရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်းရှာတွေ့၊သင်၏မေတ္တာ၊အသစ်သောအသိအကျွမ်း၊သူငယ်ချင်းများ၊ထို့နောက်ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်၊အကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။
သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သင့်စာမျက်နှာကိုအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိအကျွမ်း၏မြို့အတွက်မက္ကမက္ကစီကိုစီးတီးနှင့်ကိုချက်တင်အတွက်စကားပြောနှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအရေးတွေကိုကန့်သတ်။ တွေ့ဆုံရန်ချင်ယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးအတွက်မက္ကစီကိုစီးတီးနှင့်ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊မရှိကန့်သတ်အပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာယူ၊အတုအကောင့်များနှင့်ကန့်သတ်။ အဘယ်မှာရှိဤသည်ကလူတွေ့ဆုံရန်နှင့်တည်ထောင်ရန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သင့်စာမျက်နှာကိုအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စတင်ရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အသိအကျွမ်း၏မြို့အတွက်မက္ကမက္ကစီကိုစီးတီးနှင့်ကိုချက်တင်အတွက်စကားပြောနှင့်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအရေးတွေကိုကန့်သတ်။
အမည္တူချိန်းတွေ့အက္ပ္ကိုကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်၊ကမ္ဘာ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏အရုပ်သံမိန်းကလေးများ။ ပိုင်ရှင်ရနိုင်ယံသဘောတူ။ ။ အသုံးပြုသူများရှိသည်နိုင်တစ်ပျော်စရာဗီဒီယိုချက်တင်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဖြစ်စေမည်ဤအဂၤါရှင်ကြားအတွက်ရရှိနိုင်ရုံးတင်စစ်ဆေးဗီဒီယိုချက်တင်၏သူလူကိုလက်ခံရရှိ၎င်း၏။ ဒီေရြးခ်ယ္မႈကအဓိကများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်အသုံးပြုသူရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွင်းစတင်တည်ထောင်သည်။ အလားတူပါပဲ၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်စုကတွေ့ရှိတိုက်ခိုက်မည္။ -စတိုင်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊နှင့်ဤရွေးချယ်မှုခဲ့လက်ခံခြင်းအားဖြင့်နှစ်ဖက်စလုံး။ လည်းသဘောတူနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးနိုင်လျှင်သင်မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုဗီဒီယိုချက်တင်။ မည္တူတိုင်ကြားနိုင်ပါသည်ကြောင်းအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏စင်ကြယ်သောအမူအတွင်းနဲ့တူတယ်။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။ မျိုးပွါးများ၏ပစ္စည်းများအတွက်တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်စီးပွားရည်ရွယ်ချက်များခွင့်ပြုထားသည်သာနှင့်အတူရေးသားခွင့်ပြုချက်။ ၏အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတည်ထောင်ချိုးဖောက်၊အရာမ်ိဳးပဳခ်က္အတရားမျှတမှုနှင့်လက်ရှိဥပဒေကိုရုရွား။
ငါသည်အသက်ရှင်သောအမူအဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲနေ့ရက်များစွာရှိကြ၏အသက်တာအတွက်၊ဒါကြောင့်ဘယ်လိုသိရန်အရေးကြီးဘဝအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအမြဲအတူတက်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားအရာအားလုံးနှင့်အရာအားလုံးထွက်လာကြောင်းအထွေထွေအတွင်း။ သို့သော်၊တခါတရံတွင်ငါပြောင်းလဲမှုအရှိန်အဟုန်၏အသက်တာကိုပိုပြီးဖြည်းဖြည်းတယောက်၊ဒါပေမယ့်ဒီလိုဖြစ်လာတော့မရှိသလောက်၊အချိန်ကြာမြင့်စွာအတွက်နွိုက်။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အသံုးျပဳသူမ်ားပရိုဖိုင်းရှိသမျှကျော်ကနေအခမဲ့အဘို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။ အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်အပေါ်ဆိုက်၊သငျသညျနိုင်လိမ့်မည်လူများနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်အဘယ်သူ၏နေအိမ်သို့သာဖြစ်နွိုက်၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားတိုင်းဒေသကြီးနှင့်တိုင်းဒေသကြီး။ ရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်းရှာတွေ့၊သင်၏မေတ္တာ၊အသစ်သောအသိအကျွမ်း၊သူငယ်ချင်းများ၊အချိန်ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်၊အကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။
အ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အ ဒေသ။
-အချိန်းတွေ့ဆိုက်အထင်ကြီးများ၏အရေမှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများထံမှကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများ၏ကမ္ဘာအပါအဝင်၊။ ဤလူအများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်၊အသား၊အသက်မွေးဝမ်း၊နှင့်အကျိုးစီးပွားချင်သူအများဖွင့်ဖို့တစ်မိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ။ တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲမိတ်ဖက်ရှာ။ သင်အသုံးပွုနိုငျအစုအကြောင်းကိုသင်လိုချင်တာလူတစ်ဦးမှစတင်ချိန်းတွေ့အတွက် တွေ့သင့်တယ်ဆိုတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ဒါကြောင့်အချို့အရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာများ၊လယ်ပြင်များ၏လှုပ်ရှားမှု၊သို့မဟုတ်မျက်စိအရောင်။ ဆိုက်ကအပြေးနှင့်အတူအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊၏ကျယ်ပြန့်အများစုမှတ်ပုံတင်လူမပြဿနာများအသွင်တူအ နှင့်အခြားမြို့ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်ကာလ၌။ ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအစအဦး၏မင်္ဂလာကျုပ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောမင်ရင်းနှီး။ ဖြစ်လာမှအပြည့်အဝ-စုံအသံုးျပဳသူမ်ား၊မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်လိုအပ်သည်။ အခမဲ့ပေးသမျှဝန်ဆောင်မှုများ၏ဆိုက်နှင့်အတူ၊သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်အောင်စိတ်ဝင်စားစရာအသိ ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်တွင်တစ်မူထူးခြားသောပေးထားပါတယ်နှင့်ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့အကြောင်းအကောင့်သို့ယူအဝိသေသလက္ခဏာများလူများနှင့်၎င်းတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်။ ငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်၊ဖြစ်ဇြန္လဲ့ေနှင့်အခြားသူများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်တွင်တစ်မူထူးခြားသောပေးထားပါတယ်နှင့်ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့အကြောင်းအကောင့်သို့ယူအဝိသေသလက္ခဏာများလူများနှင့်၎င်းတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်။ ငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်၊ဖြစ်ဇြန္လဲ့ေနှင့်အခြားသူများ။
စစ်မှန်သောအခမဲ့ချိန်းတွေ့အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊အချစ်ချိန်းတွေ့၊ချက်တင်၊ချစ်ကြည်ရေးသို့မဟုတ်ပဲတစ်ဦးကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရော။ ဒါဟာအားလုံးသင်မှတက်။ မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ဆိုက်မှ၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ကနေတဆင့်လူမှုကွန်ယက်။ ဖန်တီးနေတဲ့ပရိုဖိုင်နှင့်ချိန်းတွေ့စတင်။ ကျနော်တို့အာမခံသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်လုံးဝလုံခြုံ။ ကျွန်တော်မျှဝေမပေးရန်သင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့်အတူမည်သူမဆိုနှင့်အာမခံချက်သင်၏အမည်ဝှက်။ ဒါဟာဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရ။ ကျနော်တို့ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်အတူအပေါငျးတို့သကိရိယာအဘို့အကလွယ်ကူစေရန်ထိုသူတို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှာဖွေသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ အစဉ်အမြဲထိတွေ့နေဖို့နှင့်အတူမိုဘိုင်းဗားရှင်းများ။ မေတ္တာဇာတ်လမ်းတစ်ခုတရားမျှတစွာအလေးအနက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊မပါဘဲ။ သင်ကစိတ်ဝင်စားဖြစ်စေခြင်းငှါအတွက်ချိန်းတွေ့:၊၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အသစ်အသိအကျွမ်းအတွက်ရုရှားနှင့်အဝှမ်းကမ္ဘာ-ကနေအားလုံး၏အမြို့မြို့အ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ပိုပြီးမင်္ဂလာစုံတွဲများပေါ်လာအင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုကဒီထိုကဲ့သို့သောဂၢမ်ားအလှည့်ခံရဖို့ထွက်အားကောင်း၊ပိုညီညွတ်ပြီးပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောထက်သောသူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြစဉ်အလာလမ်း။ အမှန်မှာအထူးပြုချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက် တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်အများအပြားအားသာချက်များ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ဒါကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ရွေးချယ်မှုတစ်ဖက်-အစပိုင်းတွင်၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အတွက်သင်တန်းသားများကိုအရေအတွက်အရေးရှုထောင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ခဲ့ထူးခြားတဲ့စနစ်ပါဝင်ပါသည်၏တစ်ဦးထက်ပိုတရာ။ မှကျေးဇူးတင်စကား၊ဒီအဘို့အချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေးလိမ့်မည်အဖြစ်အသီးအနှံဖြစ်၏ကြောင့်၊တတ်နိုင်သမျှသင်ချက်ချင်းရှေးခယျြအချို့နှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းအချို့အသက်တန်ဖိုးများ၊ဦးစားပေး၊ကျွမ်းကျင်မှု၊အမြင်နှင့်အကျိုးစီးပွား။ သင်သည်စတင်ချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးမပါဘဲမှတ်ပုံတင်အခမဲ့အဘို့၊ဒါပေမယ့်ဒီချဉ်းကပ်မည်မဟုတ်အဖြစ်ထိရောက်သောအဖြစ်အပြည့်အဝ-စုံမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်။ ဒီဘက်ပါ၊သင်ဖန်တီးရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းနဲ့မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အားလုံးကိုပေါ်တယ်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏၊ဒီအလိုအပ်သည်ဒါကြောင့်တခြားလူပူဇော်သောရှာဖွေနိုင်ပါတယ်-သင်အနေနဲ့မူရင်းမးခြန္းအခွင့်အလမ်းတိုးပွါးအောင်မြင်မှု။ ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်သင်ပို့စ်တစ်ခုအထိ။ လျှင်သင်အတွက်သာစိတ်ဝင်စားကြအဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊ထို့နောက်ဓာတ်ပုံကိုအတွေ့သင့်တယ်ဆိုတာအောက်ပါစံသတ်မှတ်ချက်များ: သတ်မှတ်ချက်များ:၃။ အလွန်အကျွံ၏မရှိခြင်း -အတွက်စိတ်အားထက်သန်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများဖြစ်နိုင်၏မုသာစကားကိုသို့မဟုတ်အထင်အမြင်များ၏ပုန်းအောင်းအလေးအနက်အယွင်းများ၊အကဲဖြတ်၏အသွင်အပြင်အ အလွန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ရွေးချယ်မှု၏ဘဝလက်တွဲဖော်၊အဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်များဆွဲဆောင်၊နှင့်တော့။ ဒါပေမယ့်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး၊အဘယ်သူမျှမဓာတုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခါတစ်ရံတွင်သက်ရောက်မှုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးများကြီးမှအဖက်ရွေးချယ်တိရှိရှိ၊ဂရုတစိုက်နှင့်ပေါ်အခြေခံယုတ္တိကောက်၊ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲစိတ်ထဲကဦးဆောင်ဖို့အမှန်တကယ်တည်ငြိမ်မျှတသည်။ ဆက်သွယ်သည့်အခါအင်တာနက်ပေါ်မှာရှိနေကြတယ်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်အသက်အရွယ်၊အချိန်သို့မဟုတ်ပထဝီနယ္န။ ဒါဟာလည်းအရေးကြီးကြောင်း၊ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူသည်ရှက်ကြောက်စိတ်ကိုကျော်လွှားရန်၊သို့သော်ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည်ရှိသောသူတို့အဘို့ပြီးသားအတွေ့အကြုံကဲ့၊ငြင်းပယ်ခြင်း၊ကိုယ်နှင့်လှည့်စား။ အားလုံးပြီးနောက်၊ဒီတော့လွယ်ကူသည်မဟုတ်သည်လူတစ်ဦးရဲ့ယုံကြည်ကိုး-ဒီလိုလုပ်ဖို့၊သင်စတင်ရန်လိုအပ်ချိန်းတွေ့ဘို့အအခမဲ့များအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးတဖြည်းဖြည်း၊ဂရုတစိုက်နဲ့အငြိမ့်၊နှင့်ဤအဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည် သာအထူးပြု။ မပြားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများအတွက်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုအခမဲ့၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေတဲ့အဖော်မရှိဘဲလုံးဝအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်။ မည်သူမဆိုမတှေ့နိုငျသူတို့ရဲ့စာန်လျှင်သူတို့အလေးအနက်များမှာရှာဖွေနေ။ ဒါဟာအကြံပြုသည်များကိုမှန်ကန်သောအချက်အလက်အားဖြင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရိုးရိုးသားသားမပုန်းအောင်းနေ၏သားသမီး၊ဆက်ဆံရေး၊သို့မဟုတ်အတိတ်။ မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ၊ကစားရန်တစ်အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်ဟန်ကြောင့်ကြည်သောအဖို့အဓိကသော့ချက်အမှန်တကယ်အားကြီးသောဆက်ဆံရေးမျိုး။ သို့သော်၊အဆောတလျင်မထားပါနဲ့၊ဒါဟာဖို့အရေးမှာကြည့်ရှုယူအ မီစိုက္ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စပါ။ အချစ်ကမ္ဘာဂြိုလ်-ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ဆက်ဆံရေးကိုမဆိုမြန်မာဘာသာပြန်။ သင်ဖြစ်နိုင်တစ်ဦးဂြိုဟ်တုများ၏တချို့သောမြို့များနှင့်ဒေသများ။ မကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူများနှင့်တိုက်ရှာဖွေသူတို့၏အချစ်ကို-ဤသည်အလွန်အခွင့်သာအတည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးကို၊ဒါပေမယ့်လည်းအပြည့်အဝအလှည့်ကမ္ဘာအနှံ့အခွင့်အလမ်းအသက်တာ၏အခြေခံကျကျ။ နိုင်ငံခြားစုံတွဲများမကြာခဏ လူ၊အရာသာအတည်ပြုသည့်အချက်ကိုလူတိုင်းအတွက်ဤလောကရှိတစ်ဦးစံပြဝက်လျှင်ပင်၊ဒါကြောင့်အလွန်ဝေးကွာပြီးရဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်သိကျွမ်းနှင့်အတူ။ နေသောသူတို့အမှန်တကယ်ရှာဖွေနေစဉ်အမြဲရှာဖွေအဘယ်အရာကိုသူတို့အဘို့ရှာကြသည်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေးလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးအခွင့်အလမ်းများအတွက်၊ဆောင်နှလုံးအတူတူ။
-သတိထားပါ၊ပေးဆောင်ဘယ်တော့မှမ။ ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားပါနှင့်ရောင်းချသူနှင့်အတူလူတစ်ဦးအတွက်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူရန်။ မေငြပိုထိသင်လက်ခံရရှိထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု။ သင်ရှာလိုလျှင်ထူးဆန်းတဲ့အမှုအတွက်အမှားတွေစကားေစ်းႏႈန္းကရွင္းလင္းလွန်းနိမ့်သည်၊ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအရှောင်ကြဉ်ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာခြင်း။ အချို့သောအကြောင်းအရာအပေါ်ဤစာမျက်နှာကိုဆံ့စေခြင်းငှါအချက်အလက်သည်ကိုမအောက်ကလေးများအတွက်ရည်ရွယ် ၁၆ အသက်အရွယ်အနှစ်။ ပါးလွှာသောဆံပင်ရွှေရောင်-၃၇ အသက်အနှစ်။ ငါအကြံပြုအသည်းအသန်ရင်ဆိုင်နှင့်အတူ။ ငါသည်သင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ငါ၏ရာအရပျသို့မဟုတ်သင်၏နေရာအရပ်၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာပေါ်တစ်ဦးကြားနေပလက်ဖောင်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆွေးနွေးသင်ဖို့မလိုအပ်ရးရပ်တန့်။ ငါသည်သင်ဖိတ်ခေါ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်အသက်သာပတ်ဝန်းကျင်။ သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဥရောပ္။ လာဒီမွာ။ မယ်လုသင်နှင့်အတူလေဖြတ်ခြင်းနှင့်မွှေး သင်သည်သင်၏နှင့်အတူမြည်းသည်။ ငါလာနိုင်သည်နှင့်အရေးတစ်ခုခုအတွက်စတိုင်၏ နှင့် သာနေ့လယ်စာပြီးနောက်မှ ၉ ရက်မှ ၁၇ အိုင်ပေါ်မှာ ။ ငါသည်သင်တို့ကိုပြသပါလိမ့်မယ်သင်သည်ငါ၏ဓာတ်ပုံများနှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်တူညီ။ ကောင်းပြီ-ဆောင်နှင့်အတူ၊အဆင်းလှသောကိန်းဂဏန်း။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ဗီဒီယိုအပေါ်။ ဖုန္းေခၚမည္မီ ၁၇၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျညှိနှိုင်းဖို့အထိ ၁၅၊ကျွန်တော်မဖတ်ကြဘူး။ ရေးသား ထိ ၂၃ ဒီကြော်ငြာအပေါ်စောင်ဘုတ်အဖွဲ့မော်စကိုတွင်မော်နှင့်မော်စကိုဒေသတွင်မိန်းကလေးများအမျိုးအစားသည္၊အပေါ်ချိန်းတွေ့အတွက်မော်ဝက်ဘ်ဆိုက်သင်တို့သည်လည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အခမဲ့ကြော်ငြာသို့မဟုတ်အမြင်အခြားကြော်ငြာသို့မဟုတ်ပရိုဖိုင်းအတွက်။၂၄။ မိုးေဘုတ်ချိန်းတွေ့မော်စကိုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲနှင့်အတူဖုန်းနံပါတ်နှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်အသင့်ရဲ့မြို့။ သင့်ရဲ့ပွဲအတွက်အနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်မော်မပါဘဲဆိုခ်က္အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊အပေါ်၊အီးမေးလ်နှင့်။ ဒါဟာအပင်ပိုမိုလွယ်ကူချိန်းတွေ့စတင်မော်စကိုတွင်။ သင်ကရန်မလိုအပ်ပါသွားမှတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်မှတဆင့်သွား။ ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင်၊သင်သည်တတ်နိုင်ကြောင်းရေးသားကိုယ်နေရာအရပ်နှင့်ကြော်ငြာ။ သငျသညျကြိုက်တယ်ဆိုရင်လူတစ်ဦးနှင့်အတူ၊ ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအဖေါ်ပြချက်နှင့်အလုပ်နှင့်အတူချိန်းချင်လူတစ်ဦးဆက်သွယ်ဖို့။ ဤအမျိုးအစားဖန်တီးခဲ့၊အထူးသဖြင့်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းဖို့ရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးသာယာသောအဖော်၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်တစ်ဦးဘဝလက်တွဲဖော်၊အဖြစ်အများကြီးဖြစ်နိုင်။ သင်သည်စိတ်ဝင်စားဖို့ကိုရှာဖွေစကားပြောဆိုချက်နှင့်အစည်းအဝေးနေရာ။ ဖြန့်ဝေ၏သတင်းအချက်အပေါ်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်အတွက်ဆက်စပ်အချက်အလက်ထုတ်ကုန်များပေါ်ထွက်ယူသွားတတ်၏အခြေခံကိုဖက်ဒရယ်ဥပဒေအပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏သားသမီးမှအချက်အလက်အန္တရာယ်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါ။
ဗီဒီယိုချက်တင် ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ။
အင်တာနက်ကိုအရှည်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်အခုအချိန်မှာလူသားမျိုးနွယ်အမနိုင် မရှိဘဲဘဝကိုမြင်ယောင်ကြည့်တဲ့။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာအများ:ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ပြောဆို၊အစားအစာ၊အဝတ်အစားရွေးချယ်တဲ့ကား၊အိမ်ခြံမြေ၊အပင်အချို့လူများကိုရှာဖွေသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ လူသားသည်လူမှုဖြစ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်သူအသက်မရှင်နိုင်ပါပါဘဲ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊များစွာသောလူမေတွန့်ဆုတ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နေ့စဉ်အသက်တာ၌၊ဒါကြောင့်ဤလူမျိုးအဘို့၊ငါတို့သည်နှင့်အတူတက်လာထူးခြားသောလမ်းဆက်သွယ်ဖို့၊တူချက်တင်ကစားတဲ့တစ်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကြောက်တရားနဲ့စိတ်ခံစားမှုအဖြစ်ကူညီရှာဖွေအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်ဆံရေး။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နိုင်ဖြစ်ရိုးရှင်း:မျက်နှာပြင်နှင့်ကီးဘုတ်၊ဒါပေမယ့်လည်းဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ၊သင်သိအတိအကျဘာကိုသင့်ရဲ့ မြင်သည်။ ဤသည်အလွန်အရေးနှင့်ချိန်းတွေ့စဉ်အခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၊သငျသညျသတိရဖို့လိုအကြိမ်မည်မျှသင်ဖန်ဆင်းမယ့်အမှားအခါပန်းချီအခြားလူများအပေါ်စက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်ကြီးမားပုံနှင့်ပုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဖြစ်အခြားလူများ။ ဗီဒီယိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုသူတစ်-ဖော်ရွေအသုံးျ၏လူတို့အဘို့မည်သည့်အသက်အရွယ်ကျော်၏အသက် ၁၈။ အဒေတာဘေ့စရှိပါတယ်ကြီးမားသောအရေအတွက်လစဉ်ကြေးကိုအသုံးပြုကြသောချက်တင်အဖြစ် တဲ့နည်းလမ်းကိုများအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဗီဒီယို။ သို့သော်၊အဓိကအကြောင်းအရာမများရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်စကားပြောကိုယ်ကစားတဲ့ပြုပါမည်ဟုသင်တို့အဘို့။ ငါသူတွေးမိကြသည်။ စကားပြောလိမ့်မည်အများဆုံးအသုံးမပြုနိုင်နှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအတွက်သင်ဆက်သွယ်ဖို့၊နှင့်ဤသည်အရေးအပါဆုံးနှင့်အရေးပါသောအားသာချက်။ ကြောင်းမထင်ကြဗီဒီယိုစကားပြောသည်များအတွက်သာရည်ရွယ်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအပေါ်ဝဘ်သည်ဆန့်ကျင်ပေါ်၊များစွာသောလူရိုးရှင်းတဲ့ကျွမ်းဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားအပေါ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာ၊အနုပညာ၊နိုင်ငံရေး၊သဘာဝ၊ချိန်းတွေ့အကြုံအတွက်၊ရှာတွေ့ခရီးအားဖြင့်အကျိုးစီးပွား၊နှင့်တော့။ ဟုတ်ပါတယ်၊အဆိုပါရွေးချယ်မှုကို၏ရင်ခုန်စရာဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးဖယ်ကျဉ်မထားပေ၊တယောက်ရာခိုင်နှုန်း၏သောသူစုံတွဲများများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အားကြီးသောမိသားစုအားဖြင့်ချိန်းတွေ့အင်တာနက်ပေါ်မှာ။
တစ်ခုတည်းသောအလေးအနက်နှင့်အခမဲ့ချိန်းတွေ့အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်ဦးအသစ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်ယောက်ျားအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အနေနဲ့ကြေငြာနှင့်ပူးပေါင်းအမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ကံမကောင်းစွာ၊သင်မည်မဟုတ်အကဲဖြတ်နိုင်ကလပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်။ မဒူဘိုင်းကနေရှေးခယျြကျေးဇူးပြုပြီး၏။ တစ်ခုတည်းသောအလေးအနက်နှင့်အခမဲ့ချိန်းတွေ့အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်ဦးအသစ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများကိုသို့မဟုတ်ယောက်ျားအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အနေနဲ့ကြေငြာနှင့်ပူးပေါင်းအမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ကံမကောင်းစွာ၊သင်မည်မဟုတ်အကဲဖြတ်နိုင်ကလပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်။ မဒူဘိုင်းကနေကိုရွေးပါ၊အသက်ရှင်သူကလူနှင့်အနီးအနားတိုက်ရိုက်မြေပုံပေါ်တွင်သင့်ရဲ့မြို့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့အဖုံးအားလုံးရုမြို့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံများ။
တွေ့ဆုံပြီးဒီနေရာမှာနှင့်ယခုဘဲ၊မှတ်ပုံတင်အပေါ်အခမဲ့ဝဘ်ဆိုဒ် ဆိုဒ္လိပ္စာ အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ။ ကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများ၊မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ထည့်ပါ။ ဒီအဖြစ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသင်တန်းသားများ၏'ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊သင်ကူညီလိမ့်မည်အသစ်အတွက်အသိအကျွမ်းအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ -အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ဘယ်မှာသွားနိုင်ပါတယ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်အခမဲ့အဘို့။ တွေ့ဆုံရန်ချင်မိန်းကလေးများသို့မဟုတ်ယောက်ျားတွေအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြီးအွန်လိုင်းချက်တင်၊သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့သူတို့ကိုခေါ်ရန်ဖုန်းပေါ်မှာ။ ထို့နောက်အဆိုပါ၏အင်္ဂါ ၁၀၀ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊မှတ်ပုံတင်နှင့်အခမဲ့သုံးစွဲဖို့အပေါင်းတို့သည်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆိုက်၏၊ဘယ်မှာအသစ်အစည်းအဝေးနှင့်အသိအကျွမ်း၏သင်တန်းသားများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအရပ်ကိုယူ။ ယနေ့အချိန်တွင်၊သင်သုံးနိုင်သည်ငါကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ၏ဓါတ္ပံုမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၊သူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြု၊ပင်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု။ အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုယခု။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဖြစ်သင့်။ လျှင်သင်အမှန်တကယ်မယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့သည့်အခါသင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်၊မိန်းကလေး ထိုအခါသွားဖို့အချိန်င့်တဲ့နေရာကိုကျပန်းချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများအတွက်အွန်လိုင်း။ သင်တို့အဘို့အကျပန်းစကားပြော။ ဒီနေရာမှာသင်နိုင်၊သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊မည်သည့်အချိန်တွင်ဆက်သွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးမျှတတဲ့လိင်။ စတင်ရန်၊သင်ကြိုးစားနိုင်ပါဤဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊မပြုဖို့ဘယ်လိုသိပေးဝမ်းနည်းဖွယ်ညနေခင်း၊ထို့နောက်လက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေအတွက်ဆက်သွယ်ရေး။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့နှင့်လွယ်ကူသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားပြီးဒီနည်းလမ်းကိုကြိုးစားဆက်သွယ်ရေး၏လုံးဝအခမဲ့။ သင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကြိုက်တယ်။ သင်တို့အဘို့အ-ဗီဒီယိုချက်တင်၊အဘယ်မှာရှိသင်၏ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အခြားလူများနှင့်အတူအဘယ်သူနားထောင်နိုင်သည်။ သူတို့လိမ့်မည်ပေးသင်ပွင့်နှင့်အပေးအစိတ်ကောင်း၊ထွန်းတောက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှု။ အသစ်ကျပန်းအမ်ဳိးခွင့်ပြုလူတိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူစိမ်းတစ်ယောက်အတွက်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်၊ချမ်းသာနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်၊အချိန်တွင်မဆိုလို။ ဗီဒီယိုချက်တင်အတိအကျအဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်လျှင်သင်ရချင်ကျွမ်းဝင်၊ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌သငျသညျမပွုနိုငျအရာအားလုံးကို။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းအသုံးဝင်သင်တို့အပေါ်မှာခဲ့လျှင် မကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အချိန်တွင်နှင့်ချင်မှန်ကန်သောဤအခြေအနေ၊သင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခံစား၊လတ်ဆတ်သောလုံ့လရှိသူ၊လတ်ဆတ်သောနှင့်ယုံကြည်မှု။ ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမည်သူမဆိုခွင့်ပြုရန်စကားပြောသည့်အချိန်တွင်မဆိုထိုနေ့နှင့်အတူလှပသောသူစိမ်း။ သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်ရန်ဒီမှာ။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်အခြားလူတစ်ဦးကို၊တော့သူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်နိုင်အောင်ဖြည့်ဆည်းသူတို့ကိုအနာဂတ်မှာ။ သငျသညျကနေရှေးခယျြနိုငျအများအပြားသင်ကတူ၊သင်ရှာဖွေကြောင်းတဦးတည်းသင်၌စိတ်ဝင်စားကြ။ လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားဖို့ရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမအတားအဆီး။ ကိုယ့်အလှည့်တွင်သင့်ကမ်ပန္းအစိမ်းသင်တို့ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ သင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်၊အရှေ့သို့ကိုနှိပ်ပါ။ အခြေခံကျကျအသစ်အစားျပရန္မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ဖြည့်စွက်ပရိုဖိုင်း၊အဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်အတုဓာတ်ပုံများ၊ဆက်ဆက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်များအပြား။ ဖော်နှင့်လုံခြုံရေးအာမခံချက်နေကြတယ်။ အရာတွေဖြစ်ပျက်။ သုံးပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများရရှိနိုင်ဒီလယ်ပြင်၌အဗီဒီယို။ ဒါကြောင့်သင်လိုအပ် မြင့်မားသောအရည်အသွေးအာမခံချက်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဖြစ်သင့်။ လျှင်သင်အမှန်တကယ်မတှေ့နိုငျမိတ်ဆွေတစ်ဦး၊ထို့နောက်ရဲ့အချိန်သွားကြဖို့ကျပန်းချက်တင်ဆိုက်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ။ သင်တို့အဘို့အကျပန်းစကားပြော။ ဒီနေရာမှာသင်နိုင်၊သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊မည်သည့်အချိန်တွင်ဆက်သွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးမျှတတဲ့လိင်။ စတင်ရန်၊သင်ကြိုးစားနိုင်ပါဤဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊မပြုဖို့ဘယ်လိုသိပေးဝမ်းနည်းဖွယ်ညနေခင်း၊ထို့နောက်လက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေအတွက်ဆက်သွယ်ရေး။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့နှင့်လွယ်ကူသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားပြီးဒီနည်းလမ်းကိုကြိုးစားဆက်သွယ်ရေး၏လုံးဝအခမဲ့။ သင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကြိုက်တယ်။
ခရီးကနေမိမိရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်နှင့်လွဲချော်မည်မဟုတ်ကနေကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းဗားရှင်းများအတွက်လွယ်ကူစေသည်သင်ဖို့အနေအပေါ်ချိတ်ဆက်။ ဤသည်မှာတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ရှာကြသည်သောသူအဘို့အသစ်တစ်ခုကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်အချမ်းသာကုမ္ပဏီ။ ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းလေ့လာစူးစမ်းနေသောလူများအတွက်တူညီသောအခြေအနေအဖြစ်။ သင့်ရဲ့ရှာဖွေရစာန်။ ခရီးကနေမိမိရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်နှင့်လွဲချော်မည်မဟုတ်မည်သည့်သတင်းစကားကနေကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းဗားရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်နေချိတ်ဆက်နေစဉ်သင်သွားလာရင်းအပေါ်။ ခွငများ၏တာဝန်များ:၁၀၀ ကိုအခမဲ့အခြေခံအကောင့်အသစ်များ၏။ သင်သုံးနိုင်သည်ရှာစား၊အာမခံ၊နှင့်အပြောင်းအလဲသင်၏ပရိုဖိုင်း။ သင်သာပေးဆောင်ပရီမီယံပေးသွင်းမည်ဖြစ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါသင်ပြီးစီးခြင်းတည်းဖြတ်သင့်ပရိုဖိုင်း။
ရက္မ်ား၌ အခမဲ့။ ချိန်းတွေ့ဆိုက် ။
အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၏မြို့အတွက် ၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အသစ်အသိအကျွမ်းများအတွက်တစ်ဦးမိသားစုစတင်၊လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊နှင့်ဤသည်မှာလည်းအများအတွက်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး။ ဆက်ဆံရေးကို၊ချစ်ခြင်း၊နှင့်ရော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အတွက်ခရီးသွားလာပေါင်းအဘော်များအတွက်လုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလာတစ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံများနှင့်မြို့များ၏အကျိုးစီးပွား။ သင်သည်လည်းရှာဖွေသွားလာဘော်နေသောသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာအားဖြင့်စီစစ္ျအားဖြင့်ကျားမ၊အသက်အရွယ်၊နှင့်အကျိုးစီးပွား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်အောက်ပါအဓိကကဏ္ဍ:ရှာဖွေရေး၊ဆက်သွယ်ရေး၊နှင့်။ အတွက်ဆက်သွယ်ရေးအပိုင်းဆိုက်၏၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာစကားပြောခန်းစကားပြောနှင့်အတူ၊အဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပန်းနှင့်။ ၏အစိတ်အပိုင်းအက္ပ္၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အောက်ပါပုဒ်မ:ဂိမ္း၊ခရီးသြားတစ်ဦးပွိုင့်မရှာဖွေမတွေ့ရှိသူချင်းခရီးသွား၊အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှု၊ဇာ၊အများကြီးပို။ ခရီးသြားအပိုင်းများပါဝင်သည်တစ်ဖေါ်ပြချက်၏လူကြိုက်အများဆုံးလမ်းကြောင်းအတွက်ွင့္ခရီး။ အလွန်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၊ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့အရှာနေအတွက်ချိန်းတွေ့ အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ဘယ်လိုရှာတွေ့ဖို့အလေးအနက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊အသွားအဆင့်မြင့်ရိုရှာစာမျက်နှာနှင့်ရွေးအလေးအနက်ရွေးချယ်စရာအတွက်။ ဆက်ဆံရေးအတွက်ရလဒ် ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုပြပေးလိမ့်မယ်နေသောလူများအတွက်ရှာဖွေနေချိန်းတွေ့အလေးအနက်-ကိုယ့်သင်တို့ကဲ့သို့။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊နားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားစဉ်အတွင်းပေးရှိမရှိသင့်ရဲ့ သည်ကယ့်ကိုအလေးအနက်။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်ကူညီလိမ့်မည်ဟုဤအတူ၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်သောကြောင့်သင်ချက်ချင်းခံစားရရှိမရှိတစ်ဦးသည်လူတစ်ဦးတာဝန်ရှိသည်၊သူတို့မည်သို့ဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်အထွေထွေ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်၊အမှု၏အမှုအဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက် ၊ကိုဝင်လိုက်ရွေးချယ်မှုချစ်ကြည်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးရှာဖွေနေသည့်အခါ။ မကြာခဏဆက်ဆံရေးမရှိဘူးပဲအဆုံးချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊သူတို့စီးဆင်းမှုချောမွေ့သို့ပိုပြီးလေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို၊အပြန်အလှန်မေတ္တာလာကြားလူ၊နှင့်ပိုဆိုက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို၊ဖန်တီးပျော်ရွှင်မိသားစုများနှင့်မွေးဖွားပေးစေဖို့အံ့ဩဘွယ်သောအလှ။။။။။ မဆိုအမှု၌၊အယူရန်လိုအပ်သောကြောင့်အန္တရာယ်နှင့်မဆိုင်းအသိပညာများအတွက်အကြာတွင်ကြောင့်လွဲချော်နိုင်ပါတယ်သည်လူတစ်ဦး၏အိပ်မက်များ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်အဓိကကမ်းလှမ်းသင်အခမဲ့ချိန်းတွေ့အတွက် ။ အဓိကအ၏အစိတ်အပိုင်းဆော့ဝဲလ်ဆိုဒ် အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်ရရှိနိုင်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်နှစ်ဦးစလုံးအလှည့်နှင့်အဆင့်မြင့်ပရိုဖိုင်များအတွက်ရှာဖွေအခမဲ့လုပ်ဆောင်စာပေးစာယူနှင့်အတူဆိုက်အသုံးပြုသူများနှင့်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုအတွက်အခမဲ့။ သို့သော်၊အချို့သောဆိုက်ရဲ့အင်္ဂါရပ်များမှာနေဆဲများအတွက်ပေးဆောင်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်-အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်၊သင့်ပရိုဖိုင်းအတွက်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကို၊နှင့်အသွင်။ ဘယ်လောက်အတိအကျသင်တိုင်း၊ဖြစ်စေပေးဆောင်သို့မဟုတ်အခမဲ့၊သင်ဖွင့်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်မူတည်ပြီး၊သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်။ ကျွန်တော်တို့မှာပေးထားသောအကျဉ်းချုပ်ကိုရှင်းလင်းဖော်ပြချက်များ၏အဖွဲ့ဝင်များချိန်းတွေ့ဆိုက်အထက်။ ဖြည့်စွက်ကာ၊ဆိုက်ကိုအဆက်မပြတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ပစ္စည်းများဆက်စပ်ချိန်းတွေ့ဖို့တလမ်းတည်းသို့မဟုတ်အခြား။ အသုတ်အပိုင်း၊သငျသညျစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရာနှင့်ဗီဒီယို။ လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ၊သင်ရနိုင်အကျွမ်းနှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုက်၏၊ထိုအခါ၊ပြီးနောက်မှတ်ပုံတင်အပေါ်၊သင်ပျော်မွေ့အားလုံးသည်အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်၏အချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အတွက်မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူများ။ ပြီးရိုးရှင်းတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အတည်ပြုရန်သင့် မှတ်ပုံတင်အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လင့်ခ်အတွက်အကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျဖြစ်ပါတယ်သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာ၊သို့မဟုတ်သာ-မည္။ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးစတင်ပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ယနေ့ခေတ်တွင် ၃၀။၁၀။၂၀၂၀။ ခဲ့ကြလျှင်သင်ပြီးသားသတိပြုမိ၏အားသာချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊မျှဝေသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံနှင့်အတူသင့်ရဲ့အသိအကျွမ်း၊မိတ်ဆွေများနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်။ ပျော်ရွှင်၏မြို့အတွက် ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်တစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၊ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအလွန်မကြာခဏသူတို့ရဲ့တှေ့ မြို့ကဲ့သို့:၊၊။ သွားဖို့အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုပရိုဖိုင်
Болзоо Эрчүүд Lodz: Бүртгэл үнэгүй.
အဘယ်မှာရှိကိုသိကျွမ်းရ ဗီဒီယိုစကားပြော ၁၈ အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့် တွေ့ဆုံရန်အဘို့လိင် အသက်ရှင်သောစမ်းချောင်းမိန်းကလေးများ ချက်တင်ကစားတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမိန်းကလေးများ မရှိဘဲကြော်ငြာ ဗီဒီယိုအခမဲ့ချိန်းတွေ့ ကြော်ငြာရှာဖွေစူးစမ်း ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါ
© 2021 ဗီဒီယိုချက်တင် - အသက်ချိန်းတွေ့ - အသက်ရှင်သောမြစ်ရေ!